Si baaxad leh ayaa loogu isticmaalaa shiididda dhirta iyo dhirta, cabbirkan 55mm waa sahlan tahay in la qaado oo la nadiifiyo.
Sidaad qiyaastay, mashiinka wax lagu shiido waa aaladda aad isticmaasho si aad xashiishaddaada ugu kala jajabiso weel yar oo wax lagu dhufto ama ku duub waraaqo duudduuban iyo duubab qallafsan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u shiidi karto xashiishadda haddii aadan haysan mashiinka wax lagu shiido, laakiin mishiinnadu waxeey dedejiyaan howsha waxayna bixiyaan gunnooyin sida kuwa kief catchers.
Qabsade kief waxaa loola jeedaa qolka hoose ee shaashadda oo soo ururiya dhammaan kief crystal crystal oo garaacay burooyinkii ku jiray habka shiididda. Waad iska bixin kartaa kief -ka oo ku dari kartaa baaquli dushiisa, ama u adeegso hadhow si aad u cadaadin hash -kaaga ama aad u kariso cuntada.
Shaashadda dusheeda, waxaad ka heli doontaa qol -shiidka oo leh “ilkaha” ama baalasha qabta shaqada oo dhan. Daboolka Furmiyuhu wuxuu ku dhegan yahay qaybtaan, mashiinnada biraha waxeey caadi ahaan leeyihiin birlab si ay gacan uga geystaan ​​sidii wax loo sugi lahaa marka aad shiiddo.
Sida Loo Adeegsado Furimaha Marijuana
Dadka qaarkiis waxay jecel yihiin inay culays saaraan qolka kief si ay gacan uga geystaan ​​garaacista shaashadda ee saxanka hoose. Dinaar ama nikkel la nadiifiyey ayaa tan si fiican ugu shaqeeya.
Hore: Furimaha caadada caadadii
Xiga: Booqday caws Furimaha caadada
CNC Herb Furimaha
Logo Custom Furimaha Furimaha Dagaalka
Tubaakada Daqsinka Geedaha
Booqday Geedo yaryar
Mini Geed Powder Furimaha
Titanium Herb Furimaha
Daqiiqda geedka tubaakada
Booqday caws Furimaha caadada